» जसपाको विवाद आज टुंगिदै , कसले पाउलान् आधिकारिकता ?
जसपाको विवाद आज टुंगिदै , कसले पाउलान् आधिकारिकता ?
काठमाडौं । पार्टीभित्र विवाद बढेपछि औपचारिक रुपमै विभाजन गर्ने निर्णयमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको टुंगो निर्वाचन आयोगले आज लाउँदैछ ।
आयोगको इजलासमा बहस सकिएपछि सम्भवतः आजै आदेश आउन सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई समर्थन गरेपछि महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहबीच विवाद बढेको थियो ।
तर, विभाजित भए पनि पार्टी चाहिँ कसको पक्षमा रहने भन्ने विवाद कायमै छ । उपेन्द्र पक्षले भने केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमत निर्णयसहित दावी गरेको छ ।
यता महन्थले पनि पुस ७ गतेको निर्णयलाई नै आधार मानेर कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरी आयोगमा विवरण बुझाएका छन् । जसपाको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादवकै बहुमत छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ठाकुर पक्षका पाँच जना सांसद यादवको पक्षमा उभिएका छन् । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा भएको बहुमतलाई आधार मान्ने हो भने उपेन्द्र यादवले नै पार्टीको आधिकारिकता पाउने सम्भावना बढी छ ।